सुदूरपश्चिम प्रदेश : कुल बजेटको २३ प्रतिशत खर्च | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार सुदूरपश्चिम प्रदेश : कुल बजेटको २३ प्रतिशत खर्च
on: June 06, 2019 प्रदेश समाचार, प्रदेश-सुदूरपश्चिम
सुदूरपश्चिम प्रदेश : कुल बजेटको २३ प्रतिशत खर्च
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको जेठ दोस्रो सातासम्म करीब २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख विनियोजन गरेकोमा सो अवधिमा ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले चालू आवमा पूँजीगत खर्चतर्फ १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छुट्याएकोमा २ अर्ब ५५ करोड मात्रै खर्च भएको छ । चालू खर्चतर्फ १२ अर्ब ६४ करोड बजेट रहेकोमा ३ अर्ब ३२ करोड मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुदूरपश्चिमले जानकारी दिएको छ । साढे १८ अर्बभन्दा बढी बजेट अझै खर्च हुन नसकेको कार्यालयका सूचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेयले बताए ।
उनका अनुसार हालै मात्र सुदूरपश्चिमका विभिन्न योजनामा गरी रू. ४९ करोड खर्च भएको छ । योजना छनोटमा ढिलाइ, कतिपय विषयमा ऐन बाधक, समयमा बजेट निकासा नहुुनुलगायत कारणले उल्लेखनीय रूपमा बजेट खर्च हुन सकेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
विषयगत मन्त्रालयहरूमा बजेट कार्यान्वयनभन्दा कसलाई कसरी कति बजेट दिने/नदिने असहज परिस्थितिका कारण प्रदेश सरकारको पूँजीगत बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाकृत हुन नसकेको बताइएको छ । बजेटको ठूलो अंश खर्च नहुुनु संघीयता कार्यान्वयनमा समस्याको संकेत भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. जनकराज शाह बताउँछन् । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि करीब ३० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।